Mabhuku matanhatu ezororo pazororo rino uye kune wese munhu | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Novela, Romance novel, Nhetembo
Mwedzi wa julio ichangoburitswa uye vazhinji venyu muchave kumhara (kana kuti makatoita saizvozvo) munzvimbo dzenyu dze vacations inosarudzwa. Dzinoratidzwa pamberi mwedzi miviri yekuzorora nezvakawanda kana zvishoma kuita. Saka pachava nguva kune zvese uye, chokwadika, kuverenga.
Iko kunoenda uku kusarudzwa kwe Mabhuku e6 kune ese marudzi evaverengi. Classics, dzevana, dzerudo, erootic, nhetembo… Kuti udimbure, tandara, fungisisa kana kufara. Ngationei.
1 Bhuku rekuzorora
2 Makore maviri ezororo
3 Zororo raNicolas diki
4 Zororo rekuda
5 Vhiki imwe yezororo
6 Saint-Tropez Mazororo
Yakatumirwa mukati 2014, iri basa remunyori, philologist nemuturikiri Luis Alberto weCuenca vakagamuchira mubairo weNational Poetry Award muna2015. Bhuku rekuzorora - compiles, yakakamurwa kuva masere epigraphs, Nhetembo makumi masere neshanu dzakanyorwa, zvikuru mumazhizha pakati pa2009 na2012. Bhuku raunogona kuverenga mavhesi akaita seaya: "Isu vanhu venyama takagadzirwa nezvidimbu makumi maviri: / vane gumi nevapfumbamwe uye mumwe akabudirira." Sarudzo yakanaka sekuverenga kwemweya wenhetembo.
Makore maviri ezororo
Iwe haungambofi wakarasikirwa ne jules verne classic uye zvishoma muzhizha uye pazororo. Saka nyaya iyi yakanaka kune avo vechidiki uye vasingatyi kuverenga.
Ivo protagonists ndivo gumi nevashanu vadiki yemarudzi akasiyana ayo, mushure kuputsika kwechikepe yengarava yavaive vachifamba nekuda kwedutu, vanopedzisira vava mu pacific chitsuwa. Saka vachatofanira kudaro dzidza kurarama munzvimbo isingafadzi uye isina vanhu. Kune ese matambudziko achawedzerwa kusvika kwe vamwe zvine ngozi zvakanyanya castaways. Uye chinhu chakanakisa kuziva kana vachizonunurwa kana kwete ndiko kuverenga izvozvi.
Zororo raNicolas diki
De René Goscinny, mumwe wevakagadzira Asterix naObelix, uye Jean-Pierre Sempe. La akateedzana evana yaNicolás diki ine mazita akati wandei uye iyi ndiyo yakagadzirirwa zororo.
Vabereki vaNicolás vanomushamisa nenyaya yekuti iyo zhizha zororo pamhenderekedzo. Nicolás anofara kwazvo nekuti anofarira masaisai, jecha nemitambo neshamwari ... Izvo hazvina basa kana mamiriro ekunze akaipa. Mubvunzo ndewokuti usanetseke uye Nicolás achauya nenzira dzinoverengeka dzekusazviita. Gore rakatevera, uye zvakare pazororo, Nicolás achaenda ku Blue Camp, kwausingazowana nguva yekufinhwa.
Uye zvechokwadi, pazororo, rudo nyaya hazvigone kupotsawo. Saka ndipo paanoenda, kubva kumunyori Isabel anotsvaga, the zita rekunyepedzera remushamarari Madrilenian iyo, pakati pezvinyorwa uye nyaya, yakatoburitsa gumi nemaviri emabasa.
Mune izvi anotiudza nyaya ye Natasha, ine magineti weirdos, kunyanya vanotambudza vakadzidza. Ivo vese vanomuudza uye, mushure mekundikana kwake kwazvino, sarudza kupa rudo zororo. Asi rimwe zuva rinoratidzika Jorge, mukuru wake mutsva, murume akanyarara ane hunhu hwakasimba, anozvigadzira uye anotenda murudo rwechokwadi. Natasha haazokwanise kunzvenga kukwezva kupfuura account naye.
Vhiki imwe yezororo
Uye maitiro ekusiya iyo kubata kukuru muzhizha. Ndizvo pfupi pfupi yemunyori wechiFrench anokakavara Christine Angot akatora iyo Sade Mubairo mu2012, iyo yaakaramba nekuda kwekusatarisa yake nyowani kuti ive inokanganisa. Nekudaro, iyo nyaya -murume akura anopedza mazuva mashoma pazororo muAlps nemudzidzi wechidiki- uye iyo yakajeka tsananguro yezviito zvepabonde inoratidza zvimwe. Nezvakawanda gakava zvakakomberedza, zvakanaka kuti utarise uye utonge wega.
Ini ndinopedza ne nyaya dzerudo mambokadzi yakanakira zororo. Danielle steele Ndiye mumwe wevanyori vanoverengerwa zvakanyanya pasi penyika nekuda kwenyaya dzerudo uye kushungurudzika. Muizvi vatatu vakarooranaShamwari dzenguva refu, vanouya pamwechete muSt. Tropez kutsigira akafirwa neumwe wavo.
Zvisinei, pavanosvika ikoko vanoona kuti iyo Matumba mabrochure evashanyi ndeye imba yekare anenge matongo. Asi iyo kushamisika mukuru pane zvese achave new partner uine Robert, wechidiki uye anoshamisa mutambi uyo anokonzeresa kanopfuura kamwe kunetsana nemunhu wese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku matanhatu ezororo pazororo rino uye kune wese munhu
Stewart naMitchum. Yegumi yemakore yekufa kweava vaviri vatambi vakuru